50 qof ayaa ku dhintey mudaaharaadyo kadhacay wadanka Itobiya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA 50 qof ayaa ku dhintey mudaaharaadyo kadhacay wadanka Itobiya
50 qof ayaa ku dhintey mudaaharaadyo kadhacay wadanka Itobiya
Ugu yaraan 50 qof ayaa lagu diley gobolka Oromiya ee dalka Itoobiya kadib markii mudaaharaadyo dilaa ah lagu dilay nin caan ah, afhayeen u hadlay gobolka ayaa Arbacadii sheegay.
Fannaanka Haacaaluu Hundeessaa ayaa toogasho lagu dilay xalay fiidkii iyadoo ay boolisku sheegeen inuu ahaa bartilmaameed dil. Mudaaharaadyo ayaa ka qarxay subaxa xigta ee caasimada iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gobolka Oromiya.
Dadka dhintay waxaa ku jira dibadbaxayaal iyo xubno ka tirsan ciidamada ammaanka, afhayeenka Getachew Balcha ayaa yidhi. Ganacsiyada qaar ayaa sidoo kale dab la qabadsiiyay.
“Diyaar uma aanan ahayn tan,” ayuu yiri.
Bilayska ayaa dabayaaqadii Talaadadii sheegay in nin booliis ah sidoo kale lagu dilay Addis Ababa, saddex qaraxna ay dileen ayna ku dhaawacmeen tiro aan la cayimin.
Heesaha Haacaaluu ayaa cod macaan u fidiyay jiil dhalinyaro ah oo mudaharaad dhigayey kuwaas oo sedexdii sano ee banaanbaxyada wadooyinka ay ku xirnaayeen iscasilaadii ra’iisul wasaarihii hore iyo bilowgii xilli xornimo siyaasadeed oo aad u weyn.
Aaskiisa ayaa lagu wadaa inuu dhaco khamiista.
Previous articleAmnesty International: Dawladu waa inay sameysaa baaritaan deg deg ah, Dilkii fanaanka oromada ah
Next articlew. faratoon Dalal badan oo Afrikaan ah oo Taageerey Aqoonsiga Somaliland